Gudoomiyaha Gobolka Doolo Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Xirfadlayaal Caafimaad. - Cakaara News
Gudoomiyaha Gobolka Doolo Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Xirfadlayaal Caafimaad.
Wardheer(cakaaranews) Axad, 26ka February, 2017. Gudoomiyaha gobolka doolo mudane Maxamed Cabdi Bare (Buraale) ayaa si diiran u soo dhoweeyay 19 Xirfadlayaal caafimaad oo ka mid ah xirfadlayaashii caafimaadka heer deegaan ee xafiiska caafimaadka DDSI u diray gobolada iyo degmooyinka ay abaaruhu saameeyeen si ay u xoojiyaan daryeelka adeegyada caafimaadka ee la gaadhsiinayo bulshada ku dhaqan degmooyinka abaaruhu saameeyeen.
Wuxuuna gudoomiyaha gobolka doolo mudane Maxamed Cabdi Bare soo dhawayn ka dib uga warbixiyay xirfadlayaashan guud ahaan xaaladaha degomooyinka gobolka doolo gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaad ka jira gobolka iyo goobaha loo baahan yahay in la xoojiyo. Gudoomiyaha ayaa kula dar-daarmay xirfadlayaashan in ay ka midho dhaliyaan ujeedooyinkii loo soo igmaday islamarkaana ay gaadhsiiyaan bulshada adeeg caafimaad oo ku salaysan muwaadinimo, xurmo iyo qadarin.
Dhankooda xirfadlayaashan caafimaadka oo ka hawlgalidoona dhamaan degmooyinka gobolka doolo gaar ahaana, xooga saaridoona degmooyinka abaaruhu saameeyeen iyo goobaha ay ku kulmaan bulshada abaaruhu saameeyeen ayaa waxay sheegeen in xafiiska caafimaadka DDSI dadaal xoogan ugu jiro taaba galinta adeeg caafimaad oo taya leh kana jawaabaya baahida caafimaadka ee bulshada. Waxayna hoosta ka xariiqeen in ay kaalin miisaan culus ka qaadanayaan bixinta adeegyada caafimaadka gobolka doolo ee la gaadhsiinayo bulshada gobolka gaar ahaan kuwa abaaruhu saameeyeen.